Daraasad ayaa tilmaantay in uu xiriir dhow ka dhaxeeyo dhirirka qofka iyo cudurka macaanka… – Hagaag.com
Daraasad ayaa tilmaantay in uu xiriir dhow ka dhaxeeyo dhirirka qofka iyo cudurka macaanka…
Posted on 12 Seteembar 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Daraasad cusub ayaa sheegeysa in Ragga dhererkoodu uu yahay 165 centimitir ay ugu badan yihiin inay qaadaan cudurka macaanka nooca labaad 40 boqolkiiba, markii loo fiiriyo ragga dhirirkooda yahay 175 Centimitir.
Daraasadda ayaa sidoo kale tilmaamaysa in xiriir dhow uu ka dhexeeyo dhererka iyo suuragalnimada inuu kugu dhaco macaanka nooca 2aad, sida lagu sheegay warbixin ay faafisay wargeyska the Telegraph oo ka soo baxa Ingriiska.
Daraasadihii hore waxay muujiyeen in dadka dhaadheer ay leeyihiin awood fiican oo ay ku soo saaraan insulin, taas oo mas’uul ka ah yareynta sonkorta dhiigga, una bandhigta unugyada jirka in ay gubaan, iyo sidoo kale nooca dadkaasi waxaa ku yar xadka dufanka beerka.
Waxay intaas ku dartay waxa ay uga duwan tahay daraasadan daraasooyinkii ka horeeyey waxay awood u siisay dhakhaatiirta markii ugu horeysay in cabirka dhererka uu xiriir la leeyahay cudurka macaanka, waxaa lagu ogaaday in halista cudurka uu hoos u dhacayo haddii dhererka qofka toban centimitir kor u kaco, iyo in halista qaadista cudurka ragga uu yahay 41%, iyo 33% Haweenka.
Daraasadda ayaa sidoo kale lagu ogaadey in xiriirka ka dhexeeya dhererka iyo halista cudurka macaanka nooca 2aad uu ku badan yahay dadka culeyskooda miisaanka caadiga yahay, iyadoo 10kii centimitir oo dhererkaaga ku kordha ay kaa yaraaneyso qaadista cudurka 86% ragga iyo 67% dumarka.